Iyini cinema yombhali?
I-cinema yombhali yile movie eqondiswa ngumqondisi ngokwakhe. Kule movie yiyona ndawo eyinhloko ethathwe umqondo womdali. Umqondisi uhlose ukungatholi izinzuzo, kodwa ukudlulisela imibono nezinkolelo zakhe kumbukeli. Umqondisi akudingeki acabange ukuthi uyathanda yini izilaleli zefilimu. Uyazi ukuthi kuzoba khona izethameli ezizothola efilimu yakhe injabulo yangempela. Ngokuvamile le movie ihlakaniphile, hhayi yonke i-spectator. Ngakho-ke, la mafilimu awaboniswa kuwo wonke ama-cinema. Ngokujwayelekile, ufuna ukubukeza amafilimu amaningi izikhathi eziningana, ngoba kusukela okokuqala zonke izinto ezincane cishe akunakwenzeka ukubamba. Kunamatshwayo amaningi kulawa mafilimu. I-cinema yombhali ibhekisela kwisiko lama-elite. Yenza umbukeli acabange ngokuphila kwakhe, ukuziphatha kwakhe nokuthi kwenzekani eduze kwakhe.
Yiziphi amabhayisikobho e-ibhokisi.
Amabhayisikobho e-Cash adalwa ngokuqashwa okukhulu. Amafilimu anjalo ayadingeka kakhulu futhi aboniswa kuningi lamabhayisikobho. Ngokuvamile zijabulisa. Amafilimu amaningi e-box-office ayingxenye yesigaba "esisodwa". Okusho ukuthi ukubuka ifilimu enjalo iyathakazelisa, kodwa hhayi ngaphezu kwesisodwa. Noma kunjalo, kunezithombe ezifanele kakhulu, njenge:
"Titanic", eqondiswa ngu: James Cameron, ukukhiqizwa kwe-US
"Pirates of the Caribbean", umqondisi Gore Verbinsky, ukukhiqizwa US
"Ikhodi yeDa Vinci," eqondiswa nguRon Howard, ukukhiqizwa kwe-US
"Ice Age", eqondiswa ngu Chris Wedge, uCarlos Saldana, ukukhiqizwa kwe-US
"Hancock", umqondisi uPeter Berg, ukukhiqizwa kwe-US
Isizathu sokuba i-cinema yombhali ingabi ihhovisi lebhokisi.
I-cinema yombhali ayikho imali ngenxa yokuthi inezethameli ezilindelekile. Akuwona wonke umuntu ofuna ukucabanga, ukuhlaziya. Abantu abaningi baya e-cinema ukuze baphumule, bathole inkokhelo yesimo esihle, futhi bangashiyi igumbi futhi bacabange izinsuku eziningana. Vumelana, incazelo yomqondo we "copyright cinema" ingase ilahleke uma iba umphakathi.
Ubani i-cinema yombhali oyidala.
I-cinema yombhali idalwe ababukeli abakhethiwe. Kubantu abangenandaba nezwe ahlala kulo. I-cinema yombhali iboniswa kwamanye ama-movie. Kukhona imikhosi ehleliwe yesikhala somlobi. Emikhosini inezinkampani ezigcwele ubude nezifushane ezithola imiklomelo emincintiswaneni yomhlaba wonke.
"Dante 01", eqondiswa uMark Caro, okhishwe yiFrance, i-Eskwad
"Izigameko zethrafikhi," eziqondiswa nguMikhail Morskov, ezakhiwe yiRussia.
"Ukungalaleli," okuqondiswa nguGaspard Noe, ukukhiqizwa kweFrance
"Vicky Cristina Barcelona", eqondiswa nguWow Allen, eyakhiwe yi-USA / Spain.
"I-Paper Soldier", umqondisi we-Alexei German - jr.
Amanye amafilimu omlobi, anikezwa ngabasebenzisi be-intanethi:
UJos Sterling "U-Illusionist"
Takeshi Kitano "Amadoda abuyele"
U-Anthony Hopkins "Indoda Yendlovu"
I-Roman Polanski "I-Pianist"
Kim Ki Duk "I-Real Fiction"
UTim Burton "Inhlanzi Enkulu"
UPaul Newman "uLuka onamakhaza"
Bergman "Ngesiglasi esibumnyama"
UFrancesco Appoloni "Yenza nje"
Larry Clark "Izingane" no "Ken Park"
Wim Wenders "Alice emadolobheni", "Ngokuhamba kwesikhathi", "isimo sezinto"
Amathuba okuthi "ama-Fantastic Four" aqhakazile
USophie Kinsella - "I-Shopaholic"
Usuku olujabulisayo kakhulu lonyaka: iholide lesonto ngoSepthemba 21
Isiqubulo esithi "ama-Spartans angu-300" sibheka esikhathini esidlule nekusasa
I-Italian Style Party
Amathiphu azosiza ukugcina umuthi omude wesikhathi eside
Iphupho eliqhakazile noma ama-nightmares - isixwayiso sokuqala sezifo
Ukudla okunempilo ngesikhathi sokuzivocavoca
Izinzuzo namaHlumu ezitshalo zokwelapha
I-Strawberry nge-mint no-ukhilimu
Imiyalo yokuxazulula isimo sokungqubuzana esitolo
Ukunakekelwa kwezinwele okungcono kakhulu
Ngaphandle kwemingcele: izingubo zokusika mahhala - umkhuba wangaphambi kokuwa-2016
Ungaziphoqa kanjani ukuqeqesha?
Yini okufanele ugqoke i-turtleneck
Ama-facials: izimonyo zasekhaya